वडाअध्यक्ष कल्पनाको नेतृत्वमा वडा भित्रको फोहोर व्यवस्थापनको सुरुवात – Online Khojkhabar
२:३२ मध्यान्ह, जेष्ठ १५, २०७९
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षको अगुवाइमा नगरक्षेत्रको सरसफाई अभियान संचालन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष कल्पना अधिकारीको अगुवाइमा नगरक्षेत्रको सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
वडा अध्यक्ष अधिकारीले नगरक्षेत्रका मानव बसोबास बाक्लो हुँदै गरेको र बजारको क्षेत्रको फोहर पनि दैनिक रुपमा बृद्धि भएकोले बजार क्षेत्रमा फोहरको बृद्धि भएको छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापनका लागि आजकै दिन देखि फोहर व्यवस्थापनको प्रयास सुरुवात गरिएको उनले जानकारी गराईन।
कोहलपुर वडा नं. ११ मुख्य बजार क्षेत्रमा धेरै भाग पर्दछ । यहाँको फोहर दैनिक बृद्धि भएकोले आम नागरिकको सहभागिता र सचेनाका लागि आजैबाट फोहर व्यवस्थापनका लागि सचेतना र जनसहभागिताका लागि अभियानको सुरुवात गरेको बताईन।
उनका अनुसार फोहर व्यस्थापनकै लागि कम्तिमा पनि २ जना सहयोगी कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरिने बताईन।
यस अभियानमा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्ण आचार्य, उपमेयर संगीता सुवेदी, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रहरी, उद्योग व्यपार संघका अध्यक्ष कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
आज १५ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वडा नं. ११ मा सुरुवात गरिएको सरसफाइ अभियान आगामी दिनमा निरन्तर संचालन गरिने उनले बताईन ।